Shiinaha Fiberglass Saqafka Cadka Cadka soosaarayaasha iyo shirkado | Beihai Fiberglass
Maro Cadka Fiberglass Cadka
1.Mainly waxaa loo isticmaalay sidii substrates aad u fiican qalabka saqafka biyuhu.
2.Xoog-qaadasho xoog leh, iska caabbinta daxalka, qoyaanka fudud ee bitumen, iyo wixii la mid ah.
3.Culayska dhabta ah ee 40gram / m2 ilaa 100 gram / m2, iyo inta u dhexeysa dunta waa 15mm ama 30mm (68 TEX)
1.Fiberglass Cadka Mat for saqafka
Saqafka dusha sare ee dusha sare waxaa badanaa loo isticmaalaa inay yihiin substrates aad u fiican oo loogu talagalay qalabka saqafka ee biyuhu galaan. Waxaa lagu gartaa inuu yahay xoog siligga sarreeya, iska caabbinta daxalka, qoynta fudud ee bitumen, iyo wixii la mid ah. Awoodda muddada dheer iyo iska caabbinta ilmada waa la sii horumarin karaa iyada oo lagu daro xoojinta unugyada ku yaal ballacdiisa oo dhan. Cadka saqafka sare ee biyuhu ka samaysan yihiin substrates-kani ma fududa in la dillaaco, gabowna oo qudhmo. Faa'iidooyinka kale ee unugyada saqafka biyuhu waa xoog sare, isku mid ahaansho heer sare ah, tayada cimiladeedu wanaagsan tahay iyo iska caabbinta daadinta.
Waxaan alaabta ka soo saari karnaa 40gram / m2 ilaa 100 gram / m2, oo inta u dhexeysa xargaha waa 15mm ama 30mm (68 TEX)
Strength Awood silica oo sarreysa
Flexibility Dabacsanaan wanaagsan
Thickness Dhirta dharka
Resistance U adkaysiga qoyaanka
Dib u dhac olol
Resistance daadinta iska caabin
Qaabka iyo astaamaha:
Cufnaanta toosan ee dunta xoojinta
Meel u dhexeysa maqsinnada
Xoog Tabar-darrada MD
Xoog Saanqaadka CMD
Width X Dhererka
Dia Paper Core Gudaha
* Habka tijaabada loo gudbiyey DIN52141, DIN52123, DIN52142
Adeegsiga ugu weyn waxaa ka mid ah soo saarista tubooyinka FRP ee dhexroor kala duwan, tuubooyin cadaadis sarreeya oo loogu talagalay kala-guurka batroolka, maraakiibta cadaadiska, haamaha keydka, iyo, qalabka dahaarka sida ulaha korontada iyo tuubbada dahaarka.
Shixnad & Kaydinta
Haddii aan si kale loo qeexin, alaabada Fibbaaska waa inay ahaato meel qalalan, qabow iyo qoyaan-celin la'aan. Heerkulka qolka iyo is-hoosaysiinta waa in had iyo jeer lagu ilaaliyaa 15 ℃ -35 ℃ iyo 35% -65% siday u kala horreeyaan.
Shayga waxaa lagu buuxin karaa bacaha waaweyn, sanduuqa culus ee culus iyo bacaha balaastigga ah ee la isku tolay.
1.Baadhitaankaaga waxaa laguugu jawaabi doonaa 24 saac gudahood
2.Shaqaalayaal si wanaagsan u tababaran oo khibrad leh ayaa si hufan uga jawaabi kara su'aashaada oo dhan.
Dhammaan alaabooyinkayagu waxay leeyihiin dammaanad 1-sano ah haddii aad raacdo hageheena
Kooxda khaaska ah waxay naga dhigeysaa taageero xoogan si aan u xallino dhibaatadaada xagga iibsiyada illaa dalabka
Qiimaha 5.Tartan ku saleysan tayada aan la mid nahay warshad wax soo saare
Shaybaarada 6.Guarantee tayada la mid ah wax soo saarka bulk.
Dabeecad 7.Positive in alaabta design caadadii.
1. Warshad: SHIINA BEIHAI FIBERGLASS CO., LTD
2. Cinwaanka: Beihai Industrial Park, 280 # Changhong Rd., Jiujiang City, Jiangxi China
Unug: +86 13923881139 (Mr Guo)
+86 18007928831 (Mr Jack Yin)
Fakis: +86 792 8322312
5. Xiriirrada khadka tooska ah:
Hore: Maro Cadka Dusha Fiberglass
Xiga: Fiberglass tuuboyinka duubaya Cadka Mat
Mat aan toos ahayn